Ligcine liphelile ihholo elasusa umsindo eCaluza | News24
Ligcine liphelile ihholo elasusa umsindo eCaluza
ISITHOMBE:nokulunga ngobese Seliqalile ukusebenza ihholo lakwa ward 20 eliphothulwe ngo Mandulo walo nyaka.
EMVA kwezingqinamba mayelana nokwakhiwa kwehholo lomphakathi endaweni yaseCaluza, selize lagcina ngukuphothulwa.
Leli hholo elibize ngaphezu kwezigidi ezinhlanu zamarandi kuke kwabikwa ngalo kuleli phephandaba ekuqaleni kwalo nyaka, emva kokuba amalungu omphakathi esole ukumoshwa kwemali yentela njengoba libhidlizwe selizoqedwa ukwakhiwa, laphinde lakhiwa kabusha.
Umphakathi uze wafuna kungenelele uMnyango wezokuVikelwa koMphakathi ukuze uphenye kabanzi emva kokuba liqale ukwakhiwa ngo-2013 kodwa ukwakhiwa kwalo kwalo kwama laze yaqalwa kabusha ngo-2014 ngo Zibandlela. Kuthe uma selakhiwe laphinde labhidlizwa futhi kulandela ukusolwa kwenkontilaki ebiyakha ngokungawenzi kahle umsebenzi. Yize lingakavulwa ngokusemthethweni, leli hholo liphothulwe ngoMandulo walo nyaka kanti seliqalile ukusebenza.
Lithintwa ngalolu daba ikhansela lakwa wadi 20 uMnu Thulani ‘Two Ways’ Xulu uthe ukuba khona kwaleli hholo elisezingeni eliphezulu kulindeleke ukuba kulethe intuthuko kule wadi, njengoba kuzovuleka namathuba emisebenzi uma kunemicimbi emikhulu eyenzelwa khona.
Uthe: “Emva kwezihibe ezike zaba khona esingeke sisagxila kuzona, ngiyajabula ukuthi umsebenzi ugcine uphothuliwe njengoba kudingeke ukuba umasipala uqoke enye inkontilaki yokwakha ukuqhubeka nomsebenzi.
“Ngingasho nje ukuthi leli ihholo lokuqala kulesifunda ukuba sezingeni eliphezulu njengaleli. Siyathemba lizosilekelela ekulweni nobubha kule ndawo njengoba kulindelwe ukuba lidale amathuba omsebenzi ngemicimbi ezoba khona”.
Phezu kwalokho linendawo yokudlala ibasketball, i-indoor soccer, ibhola lomnqakiswano nezindawo zokugezela nokushintsha.